Potassium (potash) nitrate: ngwakọ, ihe onwunwe, na ngwa nke fatịlaịza - Fatịlaịza - 2019
Osisi, karia ndi bi na ala dara ogbenye, choro ihe oriri na-edozi ka ha wee na eto ma na etolite. Nri nri akuku na-enyere aka aka ichikota ihe ndi ozo na nkuchi oyi;
Otu n'ime ihe ndị a ịnweta nri bụ potassium nitrate.
Ngwa potassium nitrate
Ngwa nchedo mgbe ị na-eji fatịlaịza
Nri potassium nitrate n'ụlọ
Ihe mejupụtara na ihe onwunwe nke potassium nitrate
Ntre nso ke potassium nitrate - Ọ bụ potassium-nitrogen fatịlaịza eji maka fertilizing akọ osisi na ụdị niile ala. Nke a na fatịlaịza na-arụ ọrụ dị mkpa nke osisi, malite na oge ịkụ ihe. Saltpeter na-arụ ọrụ nke mgbọrọgwụ ka ọ ghara iri nri si n'ala, na-eme ka ikike "na iku ume" na ikike photosynthesis. N'ihi mgbakwunye nke potassium nitrate, osisi ahụ na-enweta ike iguzogide ma ghara ịdaba na ọrịa.
Na mejupụtara nke potassium nitrate, ihe abụọ na-arụsi ọrụ ike: potassium na nitrogen. Dika ihe ndi ozo si eme, potassium nitrate bu uzo kristalline. Site na nchekwa ogologo oge na mpempe akwụkwọ, enwere ike idozi ntụ ntụ ahụ, ma ọ gaghị atụfu ihe ndị dị na ya. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịchekwa potassium nitrate na ngwugwu mechiri emechi.
Ị ma? A na-amata ngwọta mmiri site na osisi ndụ akwụkwọ ndụ dịka ihe kacha mma maka ihe ọkụkụ. Ọ bara uru maka ịkọ ihe ọkụkụ iji nye ha nri nke nettle, tansy, chamomile na osisi ndị ọzọ.
A na-eji akwukwo nri na akwukwo nri na akwukwo nri na akwukwo nri. Na potassium nitrate enweghi chlorine, nke na-enye ya ohere itinye ya na osisi nke na adighi ama ihe a: mkpụrụ vaịn, ụtaba, poteto. Gaa na nnu nnu nnu carrots na beets, tomato, beri kụrụ dị ka currants, raspberries, blakberị, ifuru na ornamental osisi, osisi mkpụrụ, bushes.
Ọ dị mkpa! Ọ na-adịghị atụ aro ka ifatilaiza potassium nitrate elu, radish na kabeeji. Poteto, ọ bụ ezie na-ebu nitrate, ma prefers phosphate ogige.
A na-ejikarị nitrate nitrate n'ubi dị ka nri maka cucumbers n'oge mkpụrụ osisi na-eto. Nke a na - egbochi uto nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na - eme ka akwụkwọ nri buru ibu. Ebe ọ bụ na a na-akụ mkpụrụ osisi cucumbers, akụkụ nke fatịlaịza na-aga iji guzobe cucumbers.
Enweghị nsogbu ọ bụla na esi eji potassium nitrate dị ka fatịlaịza. Ngwongwu elu na ngwakọta a nwere ike iji oge niile. N'ụlọ ahịa, a na-etinye fatịlaịza na ntanetị ndị dị mfe: obere ngwugwu maka ụlọ obere okpomọkụ na nnukwu nchịkọta nke 20-50 n'arọ maka nnukwu ugbo.
Tupu fertilizing potassium nitrate, a ghaghị iji nlezianya mee ụfọdụ: Ọ dị mkpa ịrụ ọrụ na nitrate na roba gloves, ebe ọ bụ na fatịlaịza na-eji ihe ngwọta mmiri, maka nchebe ị ga-ekpuchi anya gị na iko. Ọ bụ ihe amamihe dị na ị na-eyi akwa akwa, na ọnụnọ nke respirator abụghị ihe mgbochi: ụfụ nitrate adịghị mma maka ahụ ike.
Ntị! Ọ bụrụ na ị na-akpọrọ akpụkpọ anụ, kpochapụ mmiri na-agba ọsọ ozugbo ma mee ebe anụ ahụ metụrụ ya na antiseptik.
Potassium nitrate bụ onye na-agwọ oxidizing bụ nke na-emepụta ihe ọkụ ọkụ. Ọ dị mkpa iji chekwaa ihe dị otú ahụ na akpachi akpachi, na-ezere ịdị nso dị ize ndụ nke ihe na-ere ọkụ ma na-ere ọkụ. N'ime ụlọ ebe echekwara nnu, ị gaghị aṅụ sịga, a na-atụ aro ka ị mechie ụlọ ahụ site na ụmụaka.
Fertilizing potassium nitrate, ịkwesiri ilekọta nchekwa nchekwa maka osisi. Na fatịlaịza ka mma na-etinye obi gị dum, nakwa iji chefuo enweghị mmiri, fatịlaịza fatịlaịza jikọtara ya na ogbugba mmiri. Na ala nitrate, a dịghị eji nitrate eme ihe, dịka fatịlaịza ahụ na-eme ka ọ dị ala. Iji zere ihe ọkụkụ ọkụkụ, a na-etinye mgbakwasa nitrate nitrate nke ọma, na-elezi anya ka ị ghara inwe akwụkwọ na ị ga.
Mmasị Onye ọ bụla nke nwere azụ ụlọ agbawo nkụ ọkụ, ya na osisi, na nkụ na ya. Ikekwe ọ bụghị onye ọ bụla maara na ash bụ ụlọ nkwakọba ihe nke nri na ezigbo fatịlaịza. Na-eri nri na ntu, ị na-eji zinc, boron, magnesium, manganese, sọlfọ na ígwè mee ka ha dị ọcha.
Tupu ime potassium nitrate, ọ dị mkpa iji mepụta nhazi nhazi. Iji malite, nweta ihe ndị dị mkpa maka nkwadebe: ammonium nitrate na potassium chloride. Ndị a na-eme nri, na-abụ ndị na-eme nri, dị na ụlọ ahịa ọ bụla, na ọnụ ahịa dị.
Ugbu a, anyị na-aga n'ihu n'ịmepụta potassium nitrate n'ụlọ. Iji mee ka ya niile mee ihe kachasị mma, gbasoo usoro ndị a:
Gwakọta 100 g nke potassium chloride na 350 ml nke mmiri na-ekpo ọkụ. Ịkwesiri ịkwali ruo mgbe a chịchara chloride potassium kpamkpam, ma dozie ya nke ọma.
Wunye ngwakọta a na-agbanye n'ime akpa ahụ, tinye ya na ọkụ na nrịbama mbụ nke esi mmiri, na-agbagharị nwayọọ nwayọọ, wụsa na 95 g nke ammonium nitrate. Na-echegharị, obụpde maka nkeji atọ, wee wepụ okpomọkụ wee kpoo.
Ghọta ihe na-ekpo ọkụ n'ime karama plastic ma kwe ka ajụkwa ya kpamkpam. Mgbe ihe ngwọta dị oyi, tinye ya n'ime ngwa nju maka otu awa, mgbe oge ahụ gasịrị, nyefee ya na friza, jide ya n'ebe ahụ ruo awa atọ.
Mgbe usoro oyi niile, wepụ karama ahụ ma jiri nlezianya kpoo mmiri ahụ: potassium nitrate ga-anọgide n'ụdị crystals na ala. Ghichaa kristal na akwụkwọ na akọrọ na ebe ọkụ maka ọtụtụ ụbọchị. Saltpeter dị njikere.
Taa, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ajụ nri ndị na-emepụta ihe ndị na-eme ka ihe oriri na-eme ka ihe dị mma na-eme ka ọ bụrụ nanị ihe ndị dị na mbara igwe. Ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ adịghị akwado nke a, dịka ụdị a nke fatịlaịza dị oké mkpa iji nweta ezigbo owuwe ihe ubi, maka ịnọgide na-enwe nsogbu na osisi na oyi hard winter.
Geranium: otua esi tuo uzo ma mara nma oge ntoju?
Otutu osisi apụl Melba: ike ya na ike ya
Echeveria Echeveria: Na-elekọta otu nkume siri ike bilie n'ụlọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ N'iji potassium nitrate n'ime ubi na n'ogige